Chrome OS 88 inouya nechengetedzo yekuchengetedza screen pamwe nedzimwe shanduko | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo itsva vhezheni yeanoshanda system Chrome OS 88 mavakagadziridzwa iko kushandiswa maererano ne PIN mashandiro, pamwe nemasimba emagetsi gadzirisa screen saver uye nezvimwe.
Kune avo vasingazive nezveOS iyi, vanofanirwa kuziva izvozvo iyo yakavakirwa pane iyo Linux kernel, iyo yekushandisa ebuild / portage kuunganidzwa uye zvikamu vhura uye webhu browser Chrome 88.
Chrome OS mushandisi nharaunda inogumira kune webhu saiti uye pachinzvimbo chehurongwa hwakajairwa, zvinoshandiswa pawebhu zvinoshandiswa; zvisinei, Chrome OS inosanganisira yakazara yakazara windows, desktop, uye taskbar interface.
1 Main nyowani maficha eChannel OS 88
Main nyowani maficha eChannel OS 88
Mune iyi vhezheni itsva ye Chrome OS 88 yakawedzera kugona kwekukurumidza kupinda mumasaiti uchishandisa PIN kana chigunwe chemunwe chakatemerwa kuvhura chazvino mudziyo. Inogona kushandiswa PIN kana zvigunwe pachinzvimbo chephasiwedi yakabatana nesaiti kana seimwe yekuwedzera ficha yezvinhu zviviri-chokwadi kusiti.
Uku kushanda panguva ino inongowanikwa chete pamasaiti anotsigira kuisirwa chokwadi uchishandisa WebAuthn API (webhu hwechokwadi), iyo inobvumidza iwe kuti ubatanidze uchishandisa dzimwe nzira dzechokwadi, senge matokoni ehurdware kana maseru ezvigunwe.
Kana WebAuthn ikaona rutsigiro, bhurawuza rinopa chiziviso chakakosha nezve mukana wekushandisa PIN kana chigunwe. Semuenzaniso, WebAuthn inotsigira iyo Dropbox, GitHub, uye Okta login masayiti.
Chimwe chinhu chitsva iyo inouya kune iyi nyowani vhezheni ye Chrome OS 88, ndizvo izvo iko kugona kugadzirisa saver yekuchengetedza yakaitwa, Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza neyakaisirwa "Kuzvigadzirisa> Screen saver", uko mushandisi anogona kuronga kuratidzwa kwemifananidzo yavo pavanokiya iyo skrini.
Mifananidzo inogona kuratidzwa kubva kuarubhamu muGoogle Mifananidzo kana kuunganidzwa kwemifananidzo. Kana iyo skrini yakavharwa, iwe unogona zvakare kuita mamiriro ekunze uye iyo yemimhanzi yekutamba yekudzora widget.
Kune rimwe divi, zvinotaurwa kuti mu Chrome OS 88 lIyo nzvimbo yekuchengetedza mapikicha uye mavhidhiyo yakashandurwa muiyo kamera app uye ndeyekuti kubva pane iyi vhezheni nyowani mifananidzo izvozvi zvakachengetwa mu subdirectory «Kamera», Inowanikwa mune iyo maneja wefaira mune iyo "Yangu mafaera" chikamu, akambochengetwa mafoto nemavhidhiyo zvicharamba zviri mune yeDownloader dhairekitori.
Yeimwe shanduko izvo zvakaburitswa kunze kweshanduro iyi nyowani:
Iko kugona kwekururamisa zviperengo kwagadziriswa.
Iyo auto-chaiyo interface ikozvino inooneka inosimbisa iko kugadzirisa kwakaitwa uye inokutendera iwe kudzosera shanduko. Mushure mekugadzirisa iko kukanganisa, iro izwi ikozvino rinosara rakasimbiswa.
Kumisikidza kwe auto-kururamisa kunodzorwa muchikamu "Chishandiso> Khibhodi> Chinja mutauro wekuisa uye marongero> Input nzira> Nyowani> Auto-kururamisa".
Yakagadziridzwa switching pakati peyechokwadi madhesiki.
Kuti ukurumidze kuchinja desktop, unogona ikozvino kaviri kana katatu tapota "Shandura Desktop" nzira pfupi pane inobata skrini, kana kudzvanya "Tsvaga + [" kana "Tsvaga +]" pane iyo keyboard kuti uende kuruboshwe kana kurudyi desktop chaiyo. .
Mumagirazi ekukudza anoshandiswa kukwidziridza nzvimbo yega yega pachiratidziri, kugona kushandura kutarisisa uchishandisa keyboard (Ctrl + Alt + kiyi dzekorokoza) yakawedzerwa.
Kubata kwepasipad zvino kwaenderana neReverse scroll scroll.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yesystem, iwe unogona kutarisa izvo ruzivo nekuenda ku kune inotevera chinongedzo.
Iyo nyowani yekuvaka ikozvino yawanika kune mazhinji maChbookbook ikozvino, kuwedzera kune izvo izvo vekunze vanogadzira vane shanduro dzemakomputa akajairika ine x86, x86_64 uye maARM processor.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, kana iwe uri mushandisi weRaspberry, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona zvakare kuisa Chrome OS pane chako chishandiso, chete kuti iyo vhezheni iwe yaunogona kuwana haisiyo yazvino kwazvo, uye kuchine dambudziko nekumhanyisa vhidhiyo nekuda kwe Hardware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Chrome OS 88 inosvika nechengetedzo yekuchengetedza screen pamwe nedzimwe shanduko